Semalt: Azụmaahịa Onlinentanetị Na-aga nke Ọma
Ndị otu Semalt: Ndị ọkachamara na Ọrụ Gị
Okwu Mmalite nke Ọrụ Azụmaahịa Dijitalụ
Azụmaahịa na-aga nke ọma na Semalt. Kedu?
Mmelite ọhụụ ọ bụla sitere na ngwa nchọta na-eme ka ndị ọchụnta ego na-atụ egwu nke amaghị ama. Ajuju ajuju juru ebe nile - “Olee otu e si ele websaịtị m na peeji nke mbụ nke Google?”
Iji nọrọ na ntanetị na ibe mbụ nke igwe nchọta, ịkwesịrị ilekwasị anya na ihe SEO dị iche iche. Dịka onye ọ bụla nwere azụmaahịa na-enweghị ike ịma nka nke SEO, ọtụtụ Ndị Azụmaahịa Digital Digital kwere nkwa inyere ha aka.
Ọ dị mma, mana ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ole na ole ka a ga-atụkwasị obi ma a bịa n'ịhazi weebụsaịtị na ibe mbụ nke igwe nchọta ọ bụla. Ugbu a, aha na-akpata ihe ịga nke ọma nke ọtụtụ azụmaahịa n'ịntanetị bụ Semalt. Gaa n’ihu gụọ ka ịmatakwu banyere ya.
E hibere Semalt na 2013 dịka onye isi IT ụlọ ọrụ. Isi ụlọ ọrụ ya dị na Kyiv, Ukraine.
Ọ na-enye Ọrụ Azụmaahịa Internetntanetị dị elu nke ukwuu na ọnụahịa dị ọnụ ala. Semalt bu n’obi ọrụ ya n’ebe ndị ọchụnta azụmaahịa, ndị ahịa azụmaahịa, ndị nyocha, na ndị na-ahụ maka websaiti n’ụwa niile.
N'ụzọ bụ isi, Semalt na-enye ndị a:
SEOkwalite SEO dị elu
Vidiyo nkwado maka azụmahịa
Iji chọpụta ma Marketinglọ Ọrụ Azụmaahịa Dijitalụ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị, chọpụta uru pụrụ iche ndị ahịa ya na-enweta. Ewezuga ị na-azụ ahịa gị na elu dị elu, lee ụfọdụ uru ị na-enweta site na Semalt:
Ndị ọkachamara nwere onyinye dị 24x7
Ijere ihe karịrị ndị ahịa 300,000
A na-enye ọrụ kachasị mma kachasị mma na ọnụahịa dị ala
Usoro mgbanwe ego na-agbanwe agbanwe na-atụ ndị ahịa n'anya
Marketinglọ ọrụ Digital Digital Agency nwere ike ịnapụta nsonaazụ dị ukwuu oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ha nwere otu ndị okike, ndị nwere ọgụgụ isi, ndị na-eme ihe ike ma na-akpali.
Semalt nwere mpako inwe otu ndi juputara n’omume ndia. Site na otu egwuregwu Semalt , ị nweta karịrị uche iri abụọ na ise nke ụlọ ọrụ kacha mma.
Ndị ọkachamara a buru ụzọ ghọta mkpa azụmahịa gị wee jikọta teknụzụ na ahụmịhe ha iji nye gị nsonaazụ bara ụba.
Mgbalị ha na jikọtara na-eme ka azụmahịa gị n'ịntanetị dị n'ịntanetị. Ndị ahịa gị na-atụ anya nwere ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ gị n'ọkwá dị elu na SERPs (Search Result peeji nke).
Iji ghọta Semalt na ọrụ ya, ọ dị mkpa na ị maara, ma ọ dịghị ihe ọzọ, ihe ndabere nke Digital Marketing.
SEO kwụ ọtọ maka Nchọpụta Ihe Nchọpụta. Ọ bụ usoro kachasị nke ọdịnaya weebụ nke mere na ọ nọ na ọkwa dị elu na ndepụta nke ngwa ọchụchọ.
Na SEO, enwere gị, inyocha ọchụchọ, na onye ahụ na-achọ ihe. May nwere ike ịbụ onye nwe azụmahịa / ọkachamara azụmaahịa / onye nyocha / onye na-ahụ maka websaịtị, ihe nchọta na-abụkarị Google.
Ka e were ya na ị dere post blọọgụ na-akọwa uru dị n'ịgba mmiri. Ma, ịchọrọ igwe nchọta iji gosipụta ya dị ka nsonaazụ kachasị mgbe onye ọ bụla na-achọ isiokwu, mmiri na-ebu ọnụ mmiri.
Maka nke ahụ, ịkwesịrị ịkwalite post blog. Google ga - egosipụta ya dịka otu nsonaazụ kachasị elu mgbe mmadụ chọrọ okwu ahụ.
Iji nweta nghota nke ọma banyere SEO, tụgharịa aka na akwụkwọ ntinye akwụkwọ ntuziaka SEO maka ndị mbido.
Ọ bụ usoro ịnakọta, nyocha, na ịkọ akụkọ nke weebụsaịtị. Ọ na - enyere ndị nwe azụmaahịa aka ịghọta ma welie arụmọrụ nke weebụsaịtị ha.
Site na Nchịkọta Weebụsaịtị, ndị ahịa azụmaahịa na-amụta banyere omume na omume ndị ọbịa na saịtị ha:
Onu mmadu ole gara na saịtị ahụ?
Ọ bụ nleta mbụ ha, ka ọ bụ ha na-alaghachi ọbịa?
Ogologo oge ha ka ha nọrọ na saịtị ahụ?
Ole peeji ole ha nwetara?
Kedụ peeji ndị ha nwetara?
Otu ha si rute websaịtị - site na njikọ ma ọ bụ ozugbo?
Na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
SSL na-anọchi anya Igwe na Ntụkwasị Obi. Ọ bụ teknụzụ nchekwa dị elu na-ejikọ ihe nchọgharị weebụ na sava weebụ site na njikọ echekwara.
Ọtụtụ mgbe, data ebugharị n'etiti sava weebụ na ihe nchọgharị dị n'ụdị ederede doro anya. Ọ bụrụ na ndị ọchọ okwu ewepụ data nke ezigara n'etiti sava weebụ na ihe nchọgharị, ha nwere ike iji ya mee ihe.
SSL na - agba mbọ hụ na data niile gbasarafe n’etiti ihe nchọgharị na sava weebụ na-anọgide bụrụ nke onwe. Iji nweta nghọta kacha mma, gaa na Ntụziaka Onye Nmalite na SSL: Ihe Ọ Bụ & Ihe Mere O ji eme weebụsaịtị gị nchekwa.
Ọ bụ usoro ịchekwa njikọ ziri ezi site na weebụsaịtị ndị ọzọ na saịtị gị.
Ebumnuche nke usoro Njikọ Njikọ bụ iduzi njikọ kachasị elu na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ na - eme ka ohere gị na ebe nrụọrụ weebụ gị dị elu dị elu karịa SERPs (Search Results Results peeji).
Maka ozi ndị ọzọ gbasara usoro Njikọ Njikọ, ị nwere ike ịga na ibe Wikipedia a.
Pọtụfoliyo ngwaahịa nke Semalt nwere ọtụtụ Ọrụ Ndị Ahịa Digital. Ndị nwere azụmahịa azụmaahịa na-enweta mgbe ha họọrọ Semalt bụ na ọtụtụ ọrụ ya dabara na mkpa nke azụmaahịa.
Ndị isi bụ:
Ndụmọdụ SEO n'efu
AutoSEO bu ihe oru SEO puru iche nke emere maka ndi ahia / ndi okacha isi ahia / ndi nyocha / webmasters ndi:
Chọrọ ịbawanye ọnụnọ ha n'ịntanetị na ahịa ha
Amachaghị SEO na omume ya
Ghọta ihu nsonaazụ ahụ tupu itinye ego ha na ihe
N'oge na-adịghị anya mgbe ị denyere aha maka AutoSEO, onye nyocha weebụ ga-ezitere gị obere akụkọ. Ọ ga - enye ndụmọdụ ma ebe nrụọrụ weebụ gị dị na - elele ụkpụrụ ụlọ ọrụ na ihe ị nwere ike ime iji melite ọnọdụ ya na ngwa ọchụchọ.
Isi uru nke AutoSEO bụ:
Wepụ weebụsaịtị: Ọ na - eme ka ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị kachasị nwee mmasị na ngwa nchọta ma na - agbaso omume SEO mbụ.
Ọ na - eme Nzipụta Webụsaịtị: Ọ na - akwalite weebụsaịtị gị maka Keywords dị mkpa ma jide n'aka na ọ dị elu na Google mgbe mmadụ na - achọ isi okwu ahụ.
Na-adọta ndị nleta Ọhụụ: Site n'ọhụụ na-ahụ anya na nkwalite ziri ezi, ebe nrụọrụ weebụ gị ga-adọta ndị ọbịa ọzọ. Na, knowmara na ọtụtụ ndị ọbịa pụtara uru karị.
Na- eme ka ọnụnọ dị n'ịntanetị dịkwuo elu : Ọ na-abawanye ọnụnọ ntanetị n'ịntanetị nke ọtụtụ azụmahịa gị, yabụ, imepe ọtụtụ ohere mmepe.
FullSEO bụ ụzọ dị elu ma dị arụ ọrụ karịa iji bulie weebụsaịtị dị elu na peeji nsonaazụ ọchụchọ Google.In FullSEO, ndị ọkachamara na Semalt na-ebu ọtụtụ ụdị nke mkpokọta weebụsaịtị n'ime na mpụga. Ha na - agba mbọ hụ na ị nwetara nsonaazụ ole achọrọ karịa n'oge obere.
Uru kachanụ nke FullSEO bụ:
Weebụsaịtị na - ebuli: Ọ na - ahụ na weebụsaịtị gị na ọdịnaya ya na - emezu ogo SEO. Ọ ga - eme ka ọnụnọ ntanetị dị n'ịntanetị gị dịkwuo elu, si otú a mee ka ọ bụrụ onye ama ama karịa.
Meziwanye ogo Njikọ ahụ: FullSEO na-ewepụ njikọ dị ala na nke na-ekwekọghị n'okike na saịtị gị. Ọ na - eme ka okporo ụzọ gaa na saịtị gị naanị site na njikọ dị elu.
Ọ na - eme ka ọnọdụ ahịa dịkwuo mma: FullSEO na - enyere ndị ahịa aka ịkwalite ọnọdụ ahịa ha ma gaa n'ihu ndị iro ha.
Nsonaazụ Ọsọ na Ọnọdụ Nọgide Na- enwe Ogologo Oge: FullSEO na-ahụ na ị ga-enweta nsonaazụ ọ bụghị naanị ngwa ngwa kamakwa oge niile.
E-Commerce SEO site na Semalt bụ usoro a kwalitere iji nyere azụmahịa aka n'ịntanetị ka ọ na-eto ma nwee ọganihu.
Na E-Commerce SEO, ndị ọkachamara na Semalt na-enye gị usoro pụrụ iche na-agbanwe agbanwe maka azụmahịa gị. Ọ na - enyere aka ịkwalite azụmahịa gị na atụmanya.
Uru nke E-Commerce SEO
Ndị na-eso bụ uru isi ego nke E-Commerce SEO:
A na-adọta ndị ahịa: E-Commerce SEO bu ụzọ mee ka a mata ajụjụ azụmahịa dị mkpa maka azụmahịa gị. Mgbe ahụ, a na-eme atụmatụ nkwalite kwesịrị ekwesị iji nyere azụmahịa gị aka ịdọta ndị zụrụ ahịa ọhụrụ.
Nsonaazụ Napụta: Dịka ọtụtụ ụlọ ahịa E-Commerce abughi ehi ego, ndị nwe ha na-atụ anya na ego etinyegoro na nkwalite kwesịrị iweta nsonaazụ ha chọrọ. E-Commerce SEO na-ejide n'aka na itinye ego ha na-eweta nsonaazụ zuru oke na obere oge.
Rannye ọkwa maka Keywords dị ala: E-Commerce SEO na - eme ka ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị dị elu maka Keywords dị ala kwa. Ọ bụ n’ihi na ndị mmadụ ji mkpụrụ edemede dị ala na-achọ ihe na-azụkarị ihe mgbe ha ruru ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Nnyocha Niche: Ndị ahịa e-azụmahịa na ndị ọkachamara SEO na Semalt na-eme nyocha asọmpi banyere niche azụmahịa gị. Ha na-anakọta ozi ahụ ma jiri ya ịtọ usoro kachasị dị irè maka ihe ịga nke ọma nke azụmahịa gị n'ịntanetị.
Ọ bụ ngwaọrụ nyocha dị elu na-enyere gị aka nyochaa ihe na-eme n'ahịa ahụ. Ọ na-emekwa ka ị soro ọnọdụ ndị nke gị.
Ngwunye Nlekọta weebụsaịtị nke Semalt na-enye gị:
Isi okwu maka okwuokwu dị mkpa
Nyochaa weebụsaịtị gị kwa ụbọchị na igwe nchọta
Ego mbu ahia gi
Ihe owuwu a ga - elele ma chọpụta ọnọdụ nke Keywords gị
Ihe owuwu a ga-eme nyocha ma na-amụ ụzọ nchọta ihe nchọta nke ndị si n’ọchịchị gị
Uru isi nke akụrụngwa nyocha Google bụ:
Na-enyocha Ọnọdụ Weebụsaịtị: Ngwá ọrụ a na-enyere aka ịchọta ọnọdụ nke azụmahịa gị n'ahịa. Ozi ọ na-enye na-enyere gị aka ịchọpụta ihe dị mma na nke na-adịghị mma na-emetụta ogo nke saịtị gị.
Na-enyocha Ọnọdụ Ndị asọmpi: Ngwá ọrụ a sitere na Semalt na-ekpughe nkọwa nke ndị na-emegide gị. Can nwere ike iji ozi ọ na-enye maka abamuru gị.
Nyere Aka Discochọpụta Azụmaahịa Ọhụrụ: Ihe data ọ na-enweta mgbe nyochachara azụmahịa gị na-enyere aka ịchọta ohere mmepe na ahịa ọhụrụ.
Na-atụgharị data n'ime resentdị Dị Ugbu A: can nwere ike ịchekwa data niile nke ngwaọrụ a na-enye n'ụdị faịlụ PDF na Excel.
Saịtị na-amalite site na HTTPS adịghị mma, enyi na enyi Google, na-adọtakwu ndị ọbịa. Semalt na-enye asambodo SSL iji nweta ebe nrụọrụ weebụ ma mee ka ọ ghara ịdị mfe ọgụ.
Semalt na-enye ndụmọdụ SEO n'efu ebe ndị ọkachamara na-achọpụta ihe gbasara SEO na saịtị gị ma na-enye ndụmọdụ iji bulie ọnụnọ ya n'ịntanetị.
Ya mere, ọrụ ndị a sitere na Semalt jide n'aka na azụmahịa gị n'ịntanetị na-enweta nnukwu ihe ịga nke ọma na obere oge.
Akụkọ ndị a bụ njem njem nke ndị ahịa na-aga nke ọma. Clientsfọdụ ndị ahịa na-aga maka otu ọrụ, ụfọdụ na-ahọrọ otutu, ụfọdụ na-aga maka ndụmọdụ SEO n'efu tupu ịme oku ikpeazụ.
Nyocha Ndị Ahịa AutoSEO
Mgbe ọ na-eme AutoSEO, ihe karịrị puku weebụsaịtị 5,000 etoola na Semalt. Iji lelee nke gị, gaa na Semalt Success Akụkọ peeji . N'ebe a, inwere ike inyocha saịtị ndị a dabere na ụlọ ọrụ na mpaghara.
Nọmba na-ekwu ya dum, ma ọ bụ n'ihe metụtara Semalt, ndị ahịa na-ekwu ya niile. Can nwere ike ịga peeji nke Akaebe Odeakwukwo ya wee banye na akaebe vidiyo 33 na akaebe 146 edere. Naanị chọpụta otu esi enyerela ọtụtụ narị ndị ahịa aka imeziwanye ahịa ha n'ịntanetị.
Ndị ahịa SEO
Want chọrọ inwe obi ụtọ njem nke ndị ahịa Semalt? Naanị banye na peeji ndị ahịa SEO na-ezute ndị ahịa ma zute ndị ahịa ha nwere obi ụtọ bụ ndị torogogoro na ọrụ Semalt SEO.
Semalt bụ otu n'ime Marketinglọ Ọrụ Ndị Azụmaahịa Digital ole na ole na-ekpuchi ihe karịrị mba 155 na SEO.
Enwere ndị na-ere ahịa karịrị narị abụọ na iri abụọ na Semalt.
Ndị ọrụ Semalt maara nke ọma n'ọtụtụ asụsụ. Ha na-enyere ndị ahịa aka n ’asụsụ ọ bụla ha na-asụ.
Ihe karịrị 30,000 oru Semalt kwalitere nọ na ndepụta ọchụchọ kachasị elu.
Semalt nwere onye na-agba ajụjụ ọnụ iji dee ihe pụrụ iche, Turbo-Turtle, nke bụkwa akara nnọchi Semalt. Ọ bụ nke jọgburu onwe ya, na-anọ n'ọfịs ha oge niile.
N'ime ụwa dijitalụ a, SEO bụ isi ihe maka ịga nke ọma. Ọ bụrụ na i ji ihe ọmụma zuru ezu banyere SEO ma nwee oge iji bulie saịtị gị, rụọ ya n'onwe gị.
Agbanyeghị, ụzọ kachasị mma bụ iji tinye ọrụ nke Marketinglọ Ọrụ Azụmaahịa Digital zuru ezu, dị ka Semalt, ma hapụ ha ka hazie mkpa ahịa ịntanetị niile nke azụmahịa gị.